Dowlada China oo la rumeysan yahay inay xirtay Madaxweynihii INTERPOL – WidhWidh Online
Dowlada China oo la rumeysan yahay inay xirtay Madaxweynihii INTERPOL
Madaxweynaha hay’ada booliiska caalamiga ee (Interpol) Meng Hongwei ayaa la’a yahay meeshuu ku danbeeyey kadib safar uu ku tagay todobaad kahor wadanka uu kasoo jeedo ee China.
Meng Hongwei oo horey usoo noqday Kuxigeenka Madaxa Hay’ada Amniga ee China, ayaa dhamaadkii bishii September booqasho ku tagay wadanka China, xiligaasi oo la waayey halkuu ku danbeeyey.
Warar soo baxaya ayaa sheegaya in Mas’uulkan ay xirtay Dowladii uu horey uga tirsanaan jiray ee China, balse xukuumada Beijin ayaan illaa iyo hada si rasmi ah uga hadal xaalada Meng Hongwei.
Hay’ada Interpol oo ay xaruntoodu tahay magaalada Lyon ee dalka France, ayaa Jimcihii lasoo dhaafay si rasmi ah u shaacisay in mas’uulkaasi la-la’a yahay, waxayna hay’adaasi shalay soo saartay qoraal ay dowlada China uga codsanayaan inay jawaab ka bixiyaan baadi-goobka socda.
Xaaska Meng Hongwei oo ku sugan magaalada Lyon ayaa sheegtay in ninkeeda wax xiriir ah lasoo sameyn qoyskiisa tan iyo markuu tagay dalka China, iyadoona kiis ka furtay Booliiska Faransiiska oo si rasmi ah codsi ugu diray dowlada China inay xog kasoo siiyaan ninka meesha uu ku sugan yahay ama lagu hayo.
Madaxweynaha China, Xi Jinping ayaa muddooyinkii waday olole uu xabsiga ku dhigayo xubno ka tirsan xisbiga dalkaasi ka taliya oo xilal sare kasoo qabtay dowlada kuwaasi oo lagu heysto falal musuq maasuq, waxaana horey loo xiray Madaxa hay’ada Amniga gudaha oo ahaa ninkii ka sareeyey Mr. Meng Hongwei oo ay dhici karto laftiisa in loo heysto arrimo la xariira musuq maasuqaas.
Saldhigyada Lascanood Xalay Saqdhexe La Wareeraray & Jabahada SNM oo Isku Yaacday